Karen Community Association UK: August 2011
Karen Wrist Tying Ceremony in UK-2011
Karen Language School In Sheffield-Summer 2011 (Vi...
Invitation to Karen Traditional Wrist Tying Ceremo...
(3)ကြိမ်မြောက်၊ မလေးရှား ချည်ဖြူထုံးဖွဲ့ မင်္ဂလာ အခမ...
၆၁ ကြိမ်မြောက် ကရင်အမျိုးသားအာဇာနည်နေ့ UK မှာကျင်း...
ကရင့်အာဇာနည်နေ့ ကေအဲန် အယ်လ်အေနဲ့ ဒီကေဘီအေ ပူးပေါင...
Karen Youth UK- Youth Exchange 2011 (video)
Karen Youth UK's Youth Exchange 2011
Karen Community Association UK's Summer Karen Lang...
Burma Guard Force in Ruins
July 2011 Battle News
ကရင်ဒေသအတွက် ဖယ်ဒရယ်ရေးရာ အကျိုးရှိဟု ကိုယ်စားလှယ်...
အစိုးရက တံခါးမဖွင့်ဘဲနဲ့တော့ ကျနော်တို့မတတ်နိုင်ဘူ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စာပေါ် NLD အမတ်ဟောင်း ဒူဝါဇော်အေ...
Posted by KCA.UK at 00:300comments
Karen Language School In Sheffield-Summer 2011 (Video Part-1)
Karen Language School In Sheffield- Summer 2011 from Kpawhser on Vimeo.
Invitation to Karen Traditional Wrist Tying Ceremony
Karen Community Association UK would like to invite you to Karen Traditional Wrist Tying Ceremony
Traditional Karen sticky rice plus tea and coffee will be served after the programme.
Nant Bwa Bwa Phan at bwabwa.phan@karennationalunion.net
Brief history of Karen Wrist Tying Ceremony
Karen Wrist Tying Ceremony is one of the ancient traditions of Karen people. In the past our ancestors, the elderly people asked for their families and relatives who are away or abroad to come back together onceayear for family gathering, sharing food and tying thread to the wrists to show and remember that they are one. This tradition becomes part of our Karen culture from generation to generation.
Nowaday, onceayear, Karen people gather together for the ceremony where the elders tying white thread to the wrists, and everyone sharing wishes to their beloved friends or family members. The event has no religious significance.
Please come and join with us on our significant event. There will be various performances including music entertainment and many more.
Posted by KCA.UK at 23:260comments
(3)ကြိမ်မြောက်၊ မလေးရှား ချည်ဖြူထုံးဖွဲ့ မင်္ဂလာ အခမ်းအနား ရုပ်သံ
Posted by KCA.UK at 23:140comments
၆၁ ကြိမ်မြောက် ကရင်အမျိုးသားအာဇာနည်နေ့ UK မှာကျင်းပ
Posted by KCA.UK at 21:430comments
သြဂုတ်လ ၁၂ရက်။ စောသိန်းမြင့် (ကေအိုင်စီ)
ယနေ့ကျရောက်သည့် ၆၁နှစ်မြောက် ကရင့်အာဇာနည်နေ့ အခမ်းအနားကို ကရင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (KNL A)နှင့် တိုးတက်သောဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အမျိုးသားတပ်မတော် (DKBA)တို့ပူးပေါင်း၍ ကရင်ပြည်နယ်၊ ကော့ကရိတ်မြို့နယ် ကေ အဲန်ယူ ထိန်းချုပ်ရာ နယ်မြေတနေရာတွင် စုပေါင်း ကျင်းပကြသည်။
ဒီကေဘီအေတပ်ဖွဲ့များသည် ၁၉၉၄ခုနှစ်တွင် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (ကေအဲန်ယူ)မှ ခွဲထွက်ပြီး စစ်အစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းသွား ခဲ့သည့် ၁၅နှစ်တာကာလအတွင်း ကရင့်အမျိုးသားအာဇာနည်နေ့ကို ကျင်းပခွင့်မရှိဘဲ ယခုနှစ်မှသာ KNLA နှင့်အတူ ပထမဦးဆုံး ကျင်းပနိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။
“အခမ်းအနားကို မနက် (၇)နာရီမှာ စတယ်။ ဒီကေဘီအေဘက်ကလည်း တက်ရောက်ကြတယ်။ ဒေသခံရွာသူရွာသား အပါအ၀င် ဆိုရင်တော့ ၄၀၀နီးပါးလောက် တက်ရောက်တယ်။ အခမ်းအနားမှာတော့ စစ်ရေးပြအစီအစဉ်ရှိတယ်။ ဥက္ကဌကြီး မိန့်ခွန်းဖတ်ကြား တယ်။ မဟာမိတ်က ပို့လာတဲ့ သ၀ဏ်လွှာတွေ၊ ကေ၀ိုင်အို၊ ကေဒဗလျူအို သ၀ဏ်လွှာတွေကို ဖတ်ကြားတယ်။”ဟု ပြောသည်။
အလားတူ ကေအဲန်ယူ တပ်မဟာ(၇)တွင်လည်း ဒီကေဘီအေအဖြစ် ပြန်လည်ရပ်တည်သည့် နယ်ခြားစောင့်တပ်မှူးတပ်သားအ ချို့နှင့် ပူးပေါင်း၍ အာဇာနည်နေ့ သမိုင်းကြောင်းများအပြင် အမျိုးသားခေါင်းဆောင် စောဘဦးကြီး၏ မူလေးချက်နှင့် ပတ်သက် သည့် ဟောပြောပွဲတစ်ရပ် ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု ကေအဲန်ယူ တပ်မဟာ(၇) ရုံးထိုင်မှူး ဗိုလ်မှူးစောအယ်ဆဲဆဲက ပြောသည်။
ဒီကေဘီအေအဖြစ် ပြန်လည်ရပ်တည် သည့် နယ်ခြားစောင့်(၁၀၂၀)တပ်ရင်း၊ တပ်ခွဲ(၃)မှ ဒုတပ်ခွဲမှူး တပ်ကြပ်ကြီး စောဒို့စေးက “အခုလို ကျနော်တို့ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကို ပြန်ပြီး ဂုဏ်ပြုခွင့်ရတဲ့အတွက် ကျနော် အရမ်းပဲ ၀မ်းသာတယ်။ ကျနော့်အ တွက် ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပဲ။ ဒီကေဘီအေမှာနေတုန်းက ဒီလိုနေ့ရက်မျိုးကို အစိုးရက ကျင်းပခွင့်မပြုဘူးလေ။ ဒီဟောပြောပွဲလုပ် တဲ့အတွက် အစိုးရကို ပြန်လည်တော်လှန်ဖို့ အများကြီး စိတ်အားထက်သန်လာတယ်။”ဟု ပြောသည်။
ကရင့်အာဇာနည်နေ့ကို ကျင်းပရခြင်းမှာ ကရင်တမျိုးသားလုံးအတွက် အသက်ပေးလှူခဲ့ကြသော အာဇာနည်စောဘဦးကြီးနှင့် အခြားသော တပ်ဗိုလ်တပ်မှူး ရဲဘော်နှင့် ပြည်သူတို့၏ မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်၊ ယုံကြည်ချက်နှင့် ပေးဆပ်မှုတို့ကို အောက်မေ့ဂုဏ်ပြုခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(ကေအဲန်ယူ) ဥက္ကဌ စောတာမလာဘောက အာဇာနည်နေ့မိန့်ခွန်းတွင် ပြောဆိုသည်။
ထို့အပြင် ကေအဲန်ယူ ဥက္ကဌက တော်လှန်ရေးသမားများနှင့် ကရင်ပြည်သူတရပ်လုံး တော်လှန်ရေး၊ နိုင်ငံရေးသတိဖြင့် အတိတ်မှ အတွေ့အကြုံများကို သင်ခန်းစာယူပြီး ရန်သူ၏ သွေးထိုးလှုံ့ဆော်များ၊ တော်လှန်ရေးပြိုကွဲအောင် ၀ါဒဖြန့်ချိမှုများနှင့် ကရင်လူထု ကို ထိပါးစေသော မည်သည့်လုပ်ရပ်ကိုမဆို ၀ိုင်းဝန်းတွန်းလန်သွားရင်း ဘ၀တူ တိုင်းရင်းသားများ၊ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများနှင့်အ တူ စည်းလုံးညီညွတ်စွာဖြင့် စစ်မှန်သော ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်နိုင်ရေး ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြရန် တိုက်တွန်းထားသည်။ အလားတူ ဗိုလ်မှူးချုပ်ထင်မောင် ဦးစီးသည့် ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီမှလည်း ကရင့်အာဇာနည်များ ကျဆုံးခဲ့သည့် ကော့ကရိတ် မြို့နယ်၊ ထို့ကော်ကိုးကျေးရွာတွင် အခြေစိုက်ကာ ကရင့်အမျိုးသားအာဇာနည်နေ့ကို ယနေ့ ပြုလုပ်ခဲ့သလို တတိယနိုင်ငံရောက် ကရင်လူမျိုးများကလည်း အလုပ်ပိတ်ရက်များတွင် အသီးသီး ကျင်းပပြုလုပ်ကြမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Posted by KCA.UK at 00:170comments
ဒီနေ့ နေပြည်တော်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို တက်ရောက်လာတဲ့ စာနယ်ဇင်းသမားတွေကို ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဦးကျော်ဆန်းက ငိုယိုပြလိုက်ပါတယ်။
ကနဦး မိန့်ခွန်းချွေတာတွေတော့ အဆင်ပြေပါတယ် တဲ့။ ဒါက ကျွမ်းကျင်ပြီးသားပဲလေ။
KIA က စတင် ပစ်ခတ်တဲ့အတွက် ကချင်ဒေသမှာ စစ်ပွဲတွေ ဖြစ်နေရတယ်ပေါ့။
KIA ပါဝင်တဲ့ UNFC - ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီဟာ သောင်းကျန်းသူနဲ့ဖွဲ့ထားတယ်။
လူ့အခွင့်အရေး စုံစမ်းစစ်ဆေးသူ UN အရာရှိ အိုဟေးကင်တားနားကြီးကို လာခွင့်ပြုမယ်။
NLD က ဒီတိုင်းနေလို့မရဘူး၊ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်မှာ မှတ်ပုံတင်ရမယ်။
ဒေါ်လာနဲ့ကျပ် ငွေလဲနှုန်းအတွက် သင့်တော်တဲ့နှုန်း သတ်မှတ်မယ်။ အချိန်တန်ရင် နိုင်ငံတော်က လုပ်ပေးမယ်။
ဒေါ်လာသဘောသုံးတဲ့ FEC တွေကို ပြန်သိမ်းမယ်။
FEC သုံးသူများ မနစ်နာအောင် နိုင်ငံတော်က လုပ်ပေးမယ်။
အဲဒီလို အဲဒီလို မိန့်ခွန်းချွေပါတယ် တဲ့။
သတင်းထောက်တယောက်က မြစ်ဆုံဆည်တွေအကြောင်း မေးပါတယ်။ ဒီ မြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်းကို အများက ကန့်ကွက်နေကြပြီ။ ဘယ်လို ဆက်လုပ်မလဲ တဲ့။
“တပ်မတော်အစိုးရက ၁၉၈၈ ခုနှစ်ကတည်းက ဒုက္ခခံခဲ့တယ်။ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေက
အနစ်နာ ခံပြီး လုပ်ဆောင်ခဲ့တာ။ ဧရာဝတီမြစ်ကြီး ပျက်စီးမယ့် ကိစ္စ
ကျနော်တို့လည်း မလုပ်ပါဘူး။ အမေရိကန်လို နိုင်ငံကြီးတွေက ကျ နော် တို့ ကို
၀ိုင်း ဖိ နှိပ် ပြီး................................................”
ပြောရင်းနဲ့ ချုံးပွဲချငိုချလိုက်ပါတယ်။ ၀န်ကြီးရဲ့ ငိုကြွေးမှု ၁၅ မိနစ် ကြာသွားပြီးတဲ့နောက်မှာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို အဆုံးသတ်လိုက်ရပါတော့တယ်။
Posted by KCA.UK at 01:130comments
Untitled from eh htee kaw on Vimeo.
Posted by KCA.UK at 09:180comments
Posted by KCA.UK at 23:290comments
Karen Community Association UK's Summer Karen Language School
“ပြည်ထောင်စု အစိုးရကသာ လုပ်ရမယ့် ကိစ္စပါ။ မွန် တခုတည်းနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်တာမျိုးက ဒါ မူမမှန်ဘူး။ တပြည်လုံး အတိုင်းအတာနဲ့ လုပ်မှ တိုင်းရင်းသား အားလုံးနဲ့ ဆွေးနွေးမှ ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာ၊ အဲဒီလိုပြန်ပြောလိုက်တယ်” ဟု နိုင်ဟံသာက ဆိုသည်။
မွန်ပြည်သစ်ပါတီသည် တခြား တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖယ်ဒရယ် ကောင်စီ (UNFC) ကို ဖွဲ့စည်းထားသည်။
ထိုသို့ မဟာမိတ်ပြုထားသော UNFC အနေဖြင့်သာ အစိုးရနှင့် ဆွေးနွေးသင့်သည်ဟု အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ တဦးက ပြောသည်။
၀န်ကြီးချုပ်ဦးအုန်းမြင့်က မွန်နိုင်ငံရေးသမား တချို့နှင့် တွေ့ဆုံစဉ် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ တောတွင်းမှ ထွက်လာသင့်ကြောင်း မှတ်ချက်ပေးလေ့ရှိသည်ဟု မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ငွေသိမ်းက ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
Posted by KCA.UK at 02:140comments
weekly update battle news _1-9_8_2011
Posted by KCA.UK at 12:400comments
Weekly Update HR News 1-9_8_2011
Posted by KCA.UK at 00:020comments
Saw Eh Htee Kaw on 07861786539 email: hteekaw83@yahoo.com
The Karens are an indigenous people in the Southeast Asian countries of Thailand and Burma. In Burma, the Karens are the second largest ethnic group. The Karen aided the British during World War II, when the Japanese occupied the region. Many Karen were slaughtered by both Japanese and Burma Independence Army soldiers.
Due to the ongoing attacks by the Burmese Army, more than one hundred thousand Karen refugees are currently taking refuge in the refugee camps along the Thai-Burma border. A significant number of Karen recently migrated to western countries under the refugee resettlement program. And now around five hundred Karen people are residing in the United Kingdom.
Come and join us for the remembrance of our love ones who had sacrificed their lives for our Karen struggle to live free from oppression.
Burma Guard Force in Ruins from Karen News on Vimeo.
Posted by KCA.UK at 01:230comments
ငြိမ်းချမ်းတောင်း - Prayer of Peace [Burmese subtitles] from Front Films on Vimeo.
Posted by KCA.UK at 12:080comments
JUly 2011 Battle News -
Posted by KCA.UK at 11:520comments
ကရင်ဒေသအတွက် ဖယ်ဒရယ်ရေးရာ အကျိုးရှိဟု ကိုယ်စားလှယ်များပြောဆို
သြဂုတ်လ ၁ရက်။ နန်းသူးလေ (ကေအိုင်စီ)
ဖယ်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု ပေါ်ထွန်းလာရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရာတွင် အခြေခံသဘောတရားများ သိရှိရန် ရည်ရွယ် ၍ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ဖက်ဒရယ်ရေးရာ ရက်ရှည်သင်တန်းသည် ကရင်ဒေသအတွက် အကျိုးရှိကြောင်း ခရိုင်အသီးသီးမှ ကိုယ်စားလှယ်များက ယနေ့မနက်တွင် ပြုလုပ်သည့် သင်တန်းဆင်းပွဲ၌ ပြောဆိုသည်။
၎င်းသင်တန်းကို ကေအဲန်ယူ ဗဟို စည်းရုံးရေးဌာနမှ ဦးစီးကာ ဇူလိုင်လ ၁၃ရက်မှ ၃၀ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ခရိုင် ၇ခရိုင်မှ ကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း ၂၈ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်ဟု သိရသည်။
သင်တန်းတက်ရာက်ခဲ့သည့် ညောင်လေးပင်ခရိုင်မှ ပဒိုစောခါးမင်းက “ဒီသင်တန်းကို တက်ရောက်ရတဲ့အတွက် အကျိုးအများ ကြီး သက်ရောက်ရုံမကဘဲ လုပ်ငန်းပိုင်းမှာလည်း အထောက်အကူ ပြုတယ်။ တချိန်က ကျနော်တို့ ကရင်အမျိုးသား လွတ် မြောက်ရေးအတွက် ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု တောင်းဆိုထားတာတွေ သိခဲ့ပေမဲ့ အခု ဒီသင်တန်းကို တက်လိုက်တော့မှ ဖက် ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကို တစ်ဦးထဲနဲ့ လုပ်ဆောင်လို့ မရဘူးဆိုတာ သိလာတယ်။ ဒါကြောင့် တိုင်းရင်းသားအားလုံး ပူးပေါင်းပြီး လုပ်ဆောင်သွားကြရမှာ ဖြစ်တာကိုလည်း သိလာတယ်။”ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါသင်တန်းမှာ ဖက်ဒရယ်စနစ်၏ အခြေခံသဘောတရားများကို နားလည်ပြီး တဆင့် ပြန်လည်ရှင်းပြနိုင်ရန်၊ ဖွဲ့စည်းအုပ် ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲခြင်းနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်၊ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာများကို ပြန်လည် အသုံးချနိုင်ရန်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဒေသများတွင် ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ပေါ်ထွန်းလာရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် အကောင်အထည်ဖော်သွားရန် ရည်ရွယ်ချက် များဖြင့် သင်တန်းလုပ်ဆောင်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကေအဲန်ယူ ဗဟို စည်းရုံးရေးဌာန အတွင်းရေးမှူး စောလှထွန်းက ပြောသည်။
ရက်သတ္တ ၃ပတ်ကျော်ကြာသည့် ၎င်းဖယ်ဒရယ်ရေးရာသင်တန်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နောက်ခံသမိုင်း၊ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ သမိုင်း နှင့် ကရင့်သမိုင်းကြောင်းနောက်ခံ၊ ကရင့်နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်၊ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ စသည့်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များအား ကရင်ပြည်နယ် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေမူကြမ်း ရေးဆွဲရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များက လာရောက်ပို့ချပေးခဲ့သည်။
ယနေ့ ကျင်းပခဲ့သည့် ဖက်ဒရယ်ရေးရာသင်တန်းဆင်းပွဲသို့ ကေအဲန်ယူ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် နော်စီဖိုးရာစိန်နှင့် တွဲ ဖက်အတွင်းရေးမှူး(၂) ပဒိုစောဒေါ့လေးမူ၊ KNLA မှ ဗိုလ်မှူးကြီးစောလေးဒိုမူးတို့အပြင် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနှင့် တိုင်းရင်း သားလူမျိုးများရေးရာ ၀န်ကြီးခွန်မားရ်ကိုဘန်းနှင့် တိုင်းရင်းသား မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့ဖြစ်သည့် NDF ၏ ဒုဥက္ကဌ ခိုင်စိုး နိုင်အောင်တို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
ကေအဲန်ယူ ဗဟိုစည်းရုံးရေးဌာနသည် ယခင်ကလည်း ဖက်ဒရယ်ရေးရာ ပညာပေးရေးနှင့် နိုင်ငံရေးသင်တန်းများ ပို့ချသင် ကြားပေးခဲ့ပြီး ခရိုင်အသီးသီး၌လည်း အလားတူ သင်တန်းများ ဆက်လက် ပို့ချသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Posted by KCA.UK at 11:350comments
Monday, 1 August 2011--
သြဂုတ်လ ၁ရက်။ စောခါးစူး (ကေအိုင်စီ)
ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်း စီမံကိန်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် ထားဝယ်- ကန်ချနပူရီ အဝေးပြေးလမ်း စီမံကိန်းနယ်မြေတွင် လိုအပ်ပါက စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ကေအဲန်ယူက ပြောသည်။
“ကျနော်တို့ရဲ့ စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုကတော့ အမြဲရှိတယ်။ နောက်ထပ်လည်းရှိအုံးမယ်။ အခွင့်အရေးရရင် ရသလို အဲဒီမှာရှိတဲ့ မြန်မာ စစ်တပ်တွေကို ကျနော်တို့လူ(KNLA တပ်ဖွဲ့)တွေကတော့ ၀င်တိုက်မှာပဲ။”ဟု ကေအဲန်ယူ ဘိတ်-ထားဝယ်ခရိုင် ဥက္ကဌ ပဒိုစော ကွယ်ထူးဝင်းက ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
ယင်းအဝေးပြေးလမ်းကို ဖောက်လုပ်နေသည့် အီတာလျှံ-ထိုင်းကုမ္ပဏီ၏ အခြေစိုက်စခန်း အမှတ် (၁) တည်ရှိရာ ထားဝယ်မြို့နယ် အလက်စတိုးအခြေစိုက် မြန်မာစစ်တပ်ကို KNU တပ်ဖွဲ့ဝင်များက ဇူလိုင်၂၈ရက်နေ့တွင် နှစ်ကြိမ် တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ထိုတိုက်ခိုက်မှု ကြောင့် အဆိုပါစခန်းမှ အလုပ်သမား ၅၀ခန့် ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့သည်။
၎င်းအလုပ်သမားများသည် နောက်တနေ့နံနက်တွင် ၎င်းတို့စခန်းသို့ ပြန်သွားခဲ့သော်လည်း တိုက်ပွဲ ထပ်မံဖြစ်ပွားမည်ကို စိုးရိမ်နေ ကြသည်ဟု ထားဝယ်ရေနက် ဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်းအတွင်း လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အချက်အလက် စု ဆောင်းနေသူတဦးက ပြောသည်။
Photo-KIC (KNLA soldier)
ဇူလိုင် ၂၈ရက်နေ့ တိုက်ခိုက်မှုသည် KNU တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်အချို့နှင့် အီတာလျှံ-ထိုင်းကုမ္ပဏီ ဆောက်လုပ်ရေးတာဝန်ခံတို့ ဇူလိုင် ၁၆ရက်နေ့က ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်း စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် ယခု တိုက်ပွဲသည် အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲနှင့် မပတ်သက်ကြောင်း ပဒိုစောကွယ်ထူးက ဖြည့်စွက်ပြောဆိုသည်။ ယခု တိုက်ပွဲသည် ထားဝယ်-ကန်ချနပူရီ အဝေးပြေးလမ်း ဖောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းနယ်မြေတွင် ပထမဆုံးဖြစ်ပွားသည့် တိုက်ပွဲ ဖြစ် သည်။
Posted by KCA.UK at 23:080comments
အစိုးရက တံခါးမဖွင့်ဘဲနဲ့တော့ ကျနော်တို့မတတ်နိုင်ဘူး
Interview with Col Sia Htoo-SSA-SSP
Posted by KCA.UK at 20:170comments
အမြန်ဆုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့် ဗမာအစိုးရအား အဓိက ထား တိုက်တွန်းသင့်သည်ဟု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပါတီ၊ ကချင်အမတ်ဟောင်း ဒူဝါ မရန်ဇော်အောင် (Maran Zau Awng)မှ ဝေဖန်လိုက်သည်။
ဇူလိုင် ၂၈ ရက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အိတ်ဖွင့်ပေးစာတွင် လိပ်မူထားသော ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO)၊ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU)၊ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ (NMSP)၊ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် (SSA) တို့သည် သမ္မတဦးသိန်းစိန် အစိုးရနှင့် ဖြစ်နေသော လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမှာ ဗမာတိုင်းရင်းသားနှင့် အခြားတိုင်းရင်းသားများကြား တန်းတူညီမျှမှု မရှိသည့်အတွက် ဖြစ်သည်ဟု သူဆိုသည်။
“ကချင်၊ ကရင်၊ ရှမ်းအားလုံးက ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်နေနေတာ။ ပျားအုံလိုအေးဆေးနေနေတာ။ သူက လိုက်လျှောက် တုတ်ထိုးတာကိုး။ ထိုးတဲ့အတွက်ကြောင့် မတတ်နိုင်လို့ ပြန်တိုက်ကြတာ။”
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေသည် တိုင်းရင်းသားများကြား နိုင်ငံရေးတန်းတူညီမျှမှုမရှိပဲ ဗမာတစ်မျိုးသာ ဆက်လက် နိုင်ငံတော်အာဏာဆုပ်ကိုင်ရန် ကြိုးပမ်းနေခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကချင်နှင့် တခြား ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ ထင်မြင်ထားပါသည်။
၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေတွင် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံး တပ်မတော်၏ ကွပ်ကဲမှုအောက်တွင်ရှိရမည်ဟု ပြဋ္ဌါန်းကာ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌါန်းခွင့်အတွက် လက်နက်ကိုင်တော်လှန်သည့် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများအား ဗမာစစ်တပ်က နယ်ခြားစောင့်တပ်အသွင်ပြောင်းစေသည်။
ငြင်းဆန်သည့်အဖွဲ့အစည်းများကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြကာ ဗမာစစ်တပ် ထိုးစစ်ဆင်ရာမှ ကချင်၊ ကရင်၊ မွန်နှင့် ရှမ်း ပြည်နယ်များတွင် ပြည်တွင်းစစ် ပြန်ဖြစ်လာသည်။
“သူတို့(ဗမာအစိုးရ)စိတ်ကူးထားတဲ့အတိုင်း လုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူး။ ကျနော်တို့ မနေဘူး။ ကျနော်တို့မွေးရာပါ အခွင့်အရေး ရ ရမယ်။ သူတို့ကိုလည်း မတိုက်တော့ဘူး။ ကျနော်တို့ကိုလည်း မဖိနှိပ်နဲ့။” ဟု ဒူဝါဇော်အောင် ပြောဆိုသွားပါသည်။